बलिउडका यी स्टार जसले गरेआँखा दानकाे घाेषणा ? - ramechhapkhabar.com
बलिउडका यी स्टार जसले गरेआँखा दानकाे घाेषणा ?
साउथ फिल्मका अभिनेता पुनित कुमारको २९ अक्टोबर हृदयघातका कारण निधन भयो । ४६ वर्षमा निधन भएका पुनित कुमारले नेत्रदान गर्ने संकल्प गरेका थिए । सोही कारण निधनपछि उनको आँखा दान गरिएको छ । आँखा दान गर्ने बलिउड कलाकारहरु यी त उदाहरण मात्र हुन् । बलिउडका कयौं कलाकार छन्, जसले आफ्नो मृत्युपछि आँखा लगायतका अंग दान गर्ने संकल्प लिएका छन् ।
सुन्दर आँखाको कारण करोडौं मानिसको ढुकढुकी बन्न सफल अभिनेत्री ऐश्‍वर्या राय बचनले पनि आफ्नो आँखा दान गर्ने निर्णय गरेकी छन् । ऐश्‍वर्या अरुलाई पनि आँखा दान गर्न प्रेरित गर्दै आएकी छन् ।
सन् २०१७ को फिल्म ‘काबिल’ मा ऋतिक रोशन र यात्री गौतमले नेत्रहिन ब्यक्तिको भूमिका निर्वाह गरेका थिए । यसबाट प्रेरित भएर ऋतिकले त्यही वर्ष आफ्नो जन्मदिनको अवसरमा आँखा दान गर्ने निर्णय लिएका थिए ।
सामाजिक कामका कारणले सँधै चर्चामा रहने अभिनेता आमिर खानले ‘शिप अफ थिसेस’ फिल्मबाट प्रेरित भएर आँखा र अंग दान गर्ने निर्णय लिएका थिए । उनले आँखाको अलवा सबै उपयोगी अंग समेत दान गरेका छन् । उनको साथ उनकी पूर्व पत्नी किरण रावले पनि अंग दानको संकल्प गरेकी थिइन् ।
बलिउडका महानायक अमिताभ बच्चन पनि आफु मरेपछि आफ्नो आँखा अरुका लागि काम लागोस् भन्ने सोच्दछन् । उनले २०२० मा ७७ वर्षको उमेरमा अंगदान गर्ने निवेदन दिएका थिए ।
एक समयकी चर्चित अभिनेत्री जुही चावलाले पनि आँखा दान गरेकी छन् । उनी एकपटक मोतिबिन्दूको क्याम्पमा पुगेकी थिइन् । त्यहाँ उनले आँखाको समस्या थाहा पाएपछि दान गर्ने संकल्प गरेकी थिइन् ।
बलिउडकी ड्रिम गर्ल हेमा मालिनीले २००७ मा आँखा दान गर्ने निर्णय गरेकी हुन् ।
कमेडी किङ्ग कपिल शर्माले २०१७ मा नेत्रदानको संकल्प गरेका थिए । यो समय कपिलको शोमा राष्ट्रिय दृष्टिविहीन क्रिकेट टिम सहभागी थियो । उनीहरुबाट प्रेरित भएर कपिलले आँखा दान गरेका हुन् ।
नयाँ पुस्ताकी अभिनेत्री सोनाक्षी सिंहाले पनि आँखा दान गर्ने निर्णय लिएकी छन् । २०१८ मा आफ्नो फिल्मको प्रचारका लागि इन्डियन आइडल सेटमा सहभागी उनले आँखा दानको घोषणा गर्दै दानको लागि सबैलाई अफिल समेत गरेकी थिइन् ।